Dagaalka Mucaaradka Suuriya Oo Xoogeystay Iyo Jabhadda Al-nusra Oo Xabad Joojin Ku Baaqday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dagaalka Mucaaradka Suuriya Oo Xoogeystay Iyo Jabhadda Al-nusra Oo Xabad Joojin Ku Baaqday
Xalab, Mareeg.com: Xabadda ay isla dhacayaan kooxihii dagaalka 3 sano ka hor ku bilaaabay nidaamka Shiicadu hogaaamiso ee Suuriya ayaa cirka isku shareertay, waxaana garabka la magac baxay “Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq Iyo Shaam” ee xiriirka la leh Alqaacidda ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah kooxaha kale ee mucaaradka ah sida: “Isbaheysiga QaranKa Suuriya” ee la dagaaallamaya Bashaar Al-asad.
Cod maqal ah oo suu duubay Afhayeenka Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq Iyo Shaam, Abuu Muxamed Al-cadnaani oo lasoo dhigay bar Jihaadi ah ayuu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah “Isbaheysiga QaranKa Suuriya”.
Wuxuu sheegay Al-cadnaani in dhamaan xubnaha Isbaheysiga QaranKa Suuriya ay bartilmaameed sharci ah u yihiin kooxdiisa, haddii aysan ku dhawaaqin iney ka baxeen.
“Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam waxey u aragtaa kooxaha mucaaradka Suuriya sida: Isbaheysiga Qaranka Suuriya, Golaha Qaranka iyo Golaha Milateri iyo Abaan duulayaashooda kuwa dagaal ku qaaday dowladda Islaamiga ah, xubin kasta oo kooxahaas ku jirana wuxuu inoo yahay bartilmaameed haddii uusan ka bixin, islamarkaana ka harin la dagaallanka Mujaahidiinta” ayuu yiri Abuu Muxamed Al-cadnaani.
Jabhadda Al-nusra ee iyaduna ka dagaallanta dalka Suuriya, xiriirna la leh Alqaacidda oo ka hadashay dagaalka ay isku iclaamiyeen labo garab oo xoog leh oo ka mid ah mucaaridka dalka Suuriya.
Hogaamiyaha Jabhadaas, Abuu Muxamed Al-juulaani ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka dhex qarxay kooxaha mucaaridka ah, wuxuuna tilmaamay in dagaalkaasi sababi karo in ciidamada Bashaar Al-asad soo xoogeystaan.
Al-juulaani ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka mucaaridka dhexdooda ah uu keeno karo in Shiicada iyo dalalka galbeedku qeyb ka noqdaan dagaalka Suuriya.
Al-juulaani ayaa dagaaalka u dhaxeeya dhinacyadaas ku tilmaamay dagaal fitno ah oo u dhaxeeya kooxo Muslimiin ah, inkastoo uu sheegay iney jiraan kooxo khiyaano wada oo u adeegaya reer Galbeedka.
Bilowga dagaalka ayuu ku eedeeyey Dowladda Islaamiga ah Ciraaq iyo Shaam, wuxuuna xusay iney qeyb weyn ku leedahay hurinta colaadda ka qaraxda mucaaradka dhexdooda.
Al-juulaani ayaa ku baaqay in la sameeyo guddi sharci oo dhex dhexaad ah oo kala saara waxyaabaha ay ku dagaallameen kooxaha mucaaradka ah, wuxuuna ugu baaqay iney dhamaan usoo laabtaan hadafkii loo abuuray ee ahaa iney la dagaalamaan ciidamada xukuumadda Bashaar Al-asad.
Dagaalyahanada Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam ayaa lagu eedeeyey iney ciqaabeen dhaqtar kadibna dileen, islamarkaana afduubeen dad badan oo ka tirsan kooxaha kale ee mucaaradka ah, taasoo keentay in Isbaheysi ka kooban 8 kooxood oo la magaca baxay “Jeyshul Mujaahidiin” uu ku qaado weerar saf ballaaran ah.
Dagaalka ayaa ka dhacay magaalooyinka Xalab, Idlib iyo Ruqa, waxaana xabsiyada Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam laga sii daayey maxaabiis farabadan, halka ilaa 50 kalana ay toogteen, waxaana weli gacanta ugu jira maxaabiis kale.
Jabhadda Al-nusra iyo Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam ayaa feker ahaan isku dhow, waxeyna xiriir wanaagsan la leeyihiin Al-qaacidda, hase ahaatee Al-nusra ayaa wada shaqeyn la leh dhamaan kooxaha dagaalka kula jira madaxweyne Bashaar Al-asad, halka Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam aan wada shaqeyn kala dhaxeyn kooxahaas mucaaradka ah, waxeyna dooneysaa iney dowlad Islaami ah ka dhisaan Suuriya.
Kooxaha Mucaaridka ee Suuriya ayaa isugu jira kuwo Islaamiyiin kala duwan ah iyo kooxo Cilmaaniyiin ah, taasoo keentay iney dhexdooda ka dagaallamaan iyagoo weli dagaal kula jira madaxweyihiin ay la dagaallamayeen ee dalka Suuriya Bashaar Aal-asada.
DEG-DEG: Codeynta Doorashada Madaxweynaha Maamulka Puntland Oo Bilaabatay
Faroole, Gaas Iyo Cali Xaaji Warsame Oo Kasoo Gudbay Wareega 1-aad Ee Doorashada Puntland